Nhau - Mapurasitiki Akawanda Sei Isu "Tinodya" Mazuva ese?
Yakawanda Sei Ipurasitiki Yatino "Kudya" Mazuva ese?
Nhasi uno nyika iri kuona kusvibiswa kwepurasitiki kwakanyanya kupfuura nakare kose. Pamusangano weGomo reEverest, 3,900 metres pazasi peSouth China Gungwa, pakati peArctic ice cap uye kunyangwe pazasi peMariana Trench kusvibiswa kwepurasitiki kuri kwese kwese.
Munguva yekutsanya-kudya, isu tinodya mapurasitiki-akavharirwa tudyo, tinogamuchira mapasuru mumapurasitiki eposvo mabhegi. Kunyangwe chikafu chinokurumidza chakaputirwa mumidziyo yepurasitiki. Sekureva kweGlobal News uye ongororo yakaitwa neVictoria University, vesaenzi vakaona 9 microplastics mumuviri wemunhu uye munhu mukuru weAmerica anogona kumedza kubva pa126 kusvika 142 microplasitc particles uye kufema kubva pamakumi matatu nematatu kusvika zana nemakumi manomwe epurasitiki pazuva.
Chii chinonzi microplastics?
Inotsanangurwa nenyanzvi yeBritish Thompson, microplastic inoreva mapurasitiki ezvimedu uye zvidimbu zvine dhayamita isingasviki mashanu ma micrometer. 5 micrometer akawonda zvakapetwa kupfuura bvudzi rimwe uye haioneke nemaziso evanhu.
Iko microplastics inouya kupi?
Kubvira ipurasitiki yakaumbwa muzana ramakore rechi19, anopfuura matani mabhiriyoni masere ezviuru epurasitiki akagadzirwa, pakati payo, anopfuura matani mamirioni masere akaperera mumakungwa gore rega rega pasina kugadziriswa. Mhedzisiro: microplastics yakawanikwa mune anopfuura gumi nematanhatu ehupenyu hwemvura.
Masayendisiti achangobva kuita ongororo yakawandisa pane anopfuura 250 emabhodhoro emvura emunyika munyika dzese pfumbamwe uye vakaona kuti yakawanda yemvura yemabhodhoro inayo. Kunyangwe pombi yemvura ine microplastics mairi. Sekureva kwesangano rekutsvaga reAmerica, pakati penyika gumi nemana dzine mvura yepombi yave iri pasi peongororo, 83% yadzo yakawanikwa iine microplastics mairi. Tisingatauri nezve kuendesa uye bubble tii mumidziyo yepurasitiki nemikombe inoraswa iyo yatinopotsa taibata zuva nezuva. Iko kunowanzo kuve nekupfeka kwePolyethylene inozopwanya kuita zvidimbu zvidiki.
Izvo hazvitarisike! Asi hazvina kuoma kunzwisisa. Munyu unobva mumakungwa uye kana mvura yasvibiswa, munyu unogona sei kuva wakachena? Vatsvagiri vawana pamusoro pe550 zvidimbu zve microplastics mu1 kg yegungwa munyu.
④ Dzimba Dzinodiwa Zuva Nezuva
Chinhu chimwe chete chaungave usina kuziva ndechekuti microplastics inogona kugadzirwa nehupenyu hwako hwezuva nezuva. Semuenzaniso, kuwacha mbatya dzepolyester nemuchina wekuwachisa kunogona kubvisa yakawanda kwazvo faibha kubva kuwachira. Kana iyo tambo ikabuditswa nemvura yakasviba, inova microplastics. Vanoongorora vanofungidzira kuti muguta rine vanhu miriyoni imwe chete, toni imwe yefibisi yakaisvonaka inogona kuburitswa, yakaenzana nemari inosvika zana nemakumi mashanu emabhegi epurasitiki asingashatisike.
Faini dzakanyanya dzinogona kupedzisira dzapinda mumasero edu nemumitezo, izvo zvinogona kukonzeresa zvirwere zvakakomba sekusingaperi kwekuisa chepfu nekenza.
Naturepoly inovavarira kuburitsa inogadziriswa zvigadziriswe zvepurasitiki. Isu takaisa mari mukutsvagisa nekusimudzira eco-inoshamwaridzika zvirimwa-zvakavakirwa senge PLA, nzimbe zvinhu. Isu tinovashandisa mukugadzira zvinodikanwa zvemumba sebhegi remarara, bhegi rekutenga, bhegi repopu, kunamatira kuputira, kutema matanda, makapu, mashanga uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinouya.
Post nguva: Mar-08-2021